Arsenal Oo Daqiiqadihii Ugu Danbeeyay Barbaro Murugo Leh Kala Kulantay Victoria Iyo Arintan Oo Joogto Ka Noqotay Gunners. - Gool24.Net
Arsenal Oo Daqiiqadihii Ugu Danbeeyay Barbaro Murugo Leh Kala Kulantay Victoria Iyo Arintan Oo Joogto Ka Noqotay Gunners.
November 6, 2019 Mahamoud Batalaale
Arsenal ayaa xaalad kale oo xun sii gashay kadib markii ay barbaro murugo leh kala kulantay kooxda Vitoria oo dhamaadkii ciyaarta Gunners u diiday in ay guul gaadho.
Habaarka difaacasho xumada Arsenal xili ciyaareedkan ku habsaday ayaa noqday mid aan hore loo arag iyaga oo dhamaan kulamadii ugu danbeeyay ee tartamada oo dhan awoodi kari waayay in ay xejistaan goolal ay hogaanka ciyaarta ku hayeen.
Arsenal ayaa iska caabin xoogan kala kulantay kooxda Victoria waxayna Gunners ku qaadatay 80 daqiiqo si ay goolka furitaanka ciyaarta u halaan laakiin markii ay ciyaarta ku dhamayn lahaayeen guul waxay noqdeen kuwo ceebtoodii hore sii socotay.
Daqiiqadii 80 aad ayuu xidiga ay jamaahiirta Arsenal neceb yihiin ee Mustafi uu dhaliyay goolka u muuqday in ay Gunners guul ku gaadhaysay laakiin waxay kadib kooxda Unai Emery muujisay sida ay u nugushahay ka difaacasho ahaan.
Daqiiqadii 91 aad ee dhamaadkii ciyaarta kooxda Victoria ayaa heshay goolka barbaraha ee ay ciyaarta uga qalantay kadib markii uu kubbad laba lugoodley ah goolkan ugu dhaliyay Bruno Duarte kaas oo caawin ka helay Rochinha.
Waqtiga ay kooxda Victoria goolkan la timid ayaa ahaa waqti ayna Arsenal waxba samayn karin taas oo keentay in xaalad Unai Emery ee Arsenal ay sii xakiranto.
Xaalada ayaa u muuqata in ay tahay: “waa maalin kale iyo Arsenal la mid ah tii hore ee laga cabanayay” waxayna hadda jamaahiirta Gunners u muuqdaan kuwo uu samirkii ka dhamaaday oo doonaya in Emery la caydhiyo.
Min kulankii Crystal Palace ee ay Arsenal labada gool ku hormartay, kulankii Liverpool ee ay 3-1 waqti hogaanka ku hayeen, kulankii Wolves ee ay goolka ku horeeyeen iyo waliba kulanka Victoria waa silsilad ay Arsenal muujisay dhaqan ayna waxba ka baran.
Laakiin waxa kaliya ee uu Unai Emery murugadan iskaga yarayn karo ayaa ah in kooxdiisa Gunners ay wali kaalinta kowaad kaga jirto Group F ee tartanka Europa League.